तेह्र दिनेको व्यथा | मझेरी डट कम
मैले शिवनारायणको मोवाइल वार्तालाई पूरापूरी बेवास्था गरेको थिएँ । तर उसले बरोबर फोन गरेर भेट गर्न आउन अनुरोध गरेपछि मौका मिलाउने वचन दिएको थिएँ । फोनमा विराटनगरको न्युरो अस्पतालमा भर्ना भएको बताएथ्यो शिवनारायणले । ऊ राजविराज नगरीको साँधको गोरगाम्मा गाउँमा बस्थ्यो । म काठमाडौँमा प्रहरी सेवामा काम गर्थें । म पनि पक्षाघातको दीर्घरोगबाट क्रमश: छुटकार हुँदै गएको सुनेर ऊ निकै खुसी भएथ्यो । त्यसैले पनि भेट गर्न आउन उसले भनिरह्यो ।
एकले अर्कालाई केही नबोल्न संकेत मात्र गरे । मानौँ, म आफन्त हैन, शुभचिन्तक हुँदै होइन । म केवल सत्रुपक्षको सीआईडी हुँ । म उनीहरूको भेद खोलेर छताछुल्ल पार्छु र अप्ठ्यारोमा जाक्छु । म मित्रको खोल ओडेको सच्चा सत्रु हुँ ।
झट्टै मन फेरियो– हैन, हैन ! यस्तो कुरो हुँदै होइन । आफैँले पिटेर आफैँ उपचार गराउन कोही पनि आउँदैन । फेरि सधैँ एकअर्काको भेद खोलाखोल गर्ने गाउँले यी सोझा प्राणीहरू आज निरीह मुहारमा शान्त छन् । सबै दाजुभाइ, सबै छोरा–छोरी र आमा तथा श्रीमती एकैपटक शत्रु हुन सक्तैनन् । म आउँदा अँझ भयभीत छन् । पक्कै मप्रति यिनीहरूमा भ्रम छ । भ्रमका कारणले मलाई शिवनारायणसँग भेट गराइरहेका छैनन् ।
मेरो अनविज्ञतामा प्रश्न गर्दै लामो श्वास फेरर रामकुमारले भनेथ्यो : “शिवनारायणले कत्ति बात र लात पाएको छ, हजुरलाई थाहा छैन र ? ऊ त धन्न श्वास फेर्दै छ, म भएको भए ठाउँको ठाउँ नै शहीद हुनेथिएँ । किनभने मसँग अरूले दिएको बात सहन सक्ने मानसिक सामर्थ्य भए पनि, अरूको लात सहने शारीरिक क्षमता विल्कुलै छैन ।”
त्यसबेला मेरो मनले मिश्रीलाल यादवले सुनाएको पारिवारिक कथा सम्झन पुगेको थियो– साविकको विष्णुपुर गाउँपालिका–६ र अहिलेको इटहरी विष्णुपुर गाउँ पञ्चायत–९, सप्तरी निवासी रामी मडरका ज्येष्ठ पुत्र लखन यादव र कान्छो देवलाल यादव थिए । देवलालका तीन छोरा थिए– जेठो मिश्रीलाल यादव, महिलो रामेश्वर यादव र कान्छो दुर्गी यादव । म मिश्रीलालका रामकुमार, शिवनारायण र वीरेन्द्र गरी ३ छोरा भए । भुटनीदेवी र रामपरी गरी २ छोरी थिए । अज्ञात रोगको शिकार भएर १२ वर्षमै रामपरीले धर्ती छाडी ।
मेरी ठूली छोरी भुटनीदेवीको बिहेमा दाइजो दिनुपर्ने हुन्थ्यो । मेरो परिवारको लालनपालन र लेखपढ गराउन ठुलो धनराशी खर्च हुने गर्थ्यो । काम गर्ने म थला परिहालेँ । यस्तै सम्झेर रामेश्वर र दुर्गी छुट्टिएर गए । पाँच सन्तानको जिम्मेवारी पत्नी जिरियादेवीको काँधमा आयो । मेरो पलायनसँगसँगै परिवारमा दु:खका दिनको उदय भयो ।
जिरियादेवी सोझी र अनपढ भएकीले जेजसरी अंशबण्डा गरे पनि कुनै आपत्ती जनाइन । उसको कथन थियो, “यो तेरो भो भनेर देवरहरूले छुट्याएर दिएको भागमा खेतीपाती गर्न तयार छु । दु:ख गर्ने ठाउँ चाहियो । जसरी भए पनि असहाय छोराछोरी हुर्काउँछु ।”
जेठो छोरो रामकुमार पढ्न तेज थियो । ऊ पढ्दै गयो । माहिलो शिवनारायण भने सानैदेखि कामकाजमा सिपालु थियो । काकाहरूको प्यारो थियो । किनभने ऊ पढाइमाभन्दा काममा जोतीन मन पराउँथ्यो । माहिलो अनपढ भएर गोबरगणेशमा पऋणत हुँदै गएकाले विद्याको महत्त्व बुझेको दाजुको चित्त कुडिएछ । उसकै पहलमा शिवनारायणलाई एकै पटक गोरगाम्मा स्कुलमा कक्षा ४मा भर्ना गरियो । कान्छो वीरेन्द्र भने सानैदेखि लेखपढमै जोतिन्थ्यो ।
दुर्गी टाएर गाडीमा समानहरू ढुवानी गर्ने गर्थ्यो । उसलाई शिवनारायण सघाउँथ्यो । संयुक्त परिवार भएकाले मेरा छोराछोरीहरू रामेश्वर र सकलदेवले नै हुर्काएका हुन् । भाइ बुहारीहरूको योगदान पनि कम छैन ।
“तिमी शिवकुमार रहेछौ । नामजस्तै काम गर्नू ! तिमी जन्मले नै यादव रहेछौ । अब पढेर पनि कृष्ण यदुवंशी जादवजस्तै बन्नू ! शिवनारायणलाई दु:ख–सुखको साथी बनाउनू !” अन्त्यमा मिश्रीलालले भनेका थिए, “जहिल्यै जे सहयोग माग्छ, पूरा गरिदिनू । मनको कमलो छ । बाटो अल्मलिए झोक्राउँछ । साथ दियो भने, साहस थपिन्छ । गुनको सधैँ कदर गरिरहन्छ ।”
महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस पढेर बाहिरिएका ठिटाठिटीहरूको कोलाहलले राजविराज–कुनौली सडक भरिएको थियो । मलाई पछाडि बसाएर एक सिकुटे ठिटो साइकल हाँकिरहेको थियो । ठिटाठिटीहरू ढेप्पिँदै साइकलमा ठोक्किन लाग्दा हत्त न पत्त ब्रेक दाब्दै घन्टी बजाउँथ्यो । साइकल रोकिएपछि पनि कोही ठोक्किन आइपुग्थ्यो ।
“ठीकै छ, जाँदा हुन्छ ।” दोष लगाउने चुपचाप फर्कन्दै गर्दा भन्थ्यो, “सङ्केको भए, बत्तीसटा दाँत गन्न हुन्थ्यो ! माफी मागेपछि के गर्नू !”
ऊ मसँग भने जानि नजानिकन पनि नेपालीमै गफ गर्न मन पराउँथ्यो । अरू अपरिचितसँग भने लजाउँथ्यो र मैथिलीमै बोल्थ्यो ।
हामी सिनेमा हेरेर फर्कन्दा रातको दश बज्न लागेको हुन्थ्यो । च्युराभुजा खाएरसँगै सुतिन्थ्यो । ऊ विहान झिसमिसेमै कुट्टी काट्न र भैँसी दुहुन भनी घर पुग्थ्यो । म भने सिनेमामा देखेका कुरा सम्झीसम्झी विहान भरि कल्पना लोकमा विचरण गर्नमै मस्त हुन्थेँ ।
“नमस्ते है, शिवकुमार यादवजी ! तपाईंको २०७४ कार्तिक १० को कालो दिनझैँ भयो मलाई पनि । तपाईंलाई दैवले ठग्यो, मलाई आफ्नै मान्छेले ठहरै पारे ।” उसले नमस्कारका लागि दाहिने हात उठायो तर टाउको उठाउन सकेन, “तपाईंलाई दु:ख दिने नियत त होइन । यद्यपि दु:ख देखाउने इच्छा भने अवश्य हो । किनभने तपाईं लेखक हो, दु:ख देखे लेख्न मन लाग्ला । अन्याय भेटे समेट्ने चाह जाग्ला !”
“नमस्ते, मलाई लेख्ने विषयवस्तु चाहिएको छैन, मेरो मित्रलाई यस दुर्दशामा पु्र्याउनेको नाम र घटनाको विवरण चाहियो ।” छक्क पर्दै मैले थपेँ, “सत्य तपाईंको साथमा छ, तपाईंलाई केही हुन्न, शिवनारायणजी !”
मैले यसो भनिरहँदा उसको आँखा टिलपिल थिए । अनुहारको देब्रे पाटो सुन्निएको थियो । देब्रे खुट्टा तन्नक्क तङ्काएको थियो । उसले सबथोक सुतेरै गर्नुपर्थ्यो । सधैँ एक ठाउँमा हलचल नगरिरहनै नसक्ने प्राणी आज दुई हप्तादेखि कोल्टे नफेरिकन कुँजिएको थियो । उसका शुभचिन्तक भनाउँदाहरू आउने, शुभेच्छाका शब्द ओकल्ने र फर्कने गरेको पाइयो । कसैले पनि तँलाई न्याय दिलाउँछौँ भनेनन् ।
यस पटक तिनैको निर्देशन र संलग्नतामा हामी स–परिवारलाई दर्जनौँले आक्रमण गरे । कत्ति लाठी भाँचिए, कत्ति फट्टा तोडिए । कत्ति क्रन्दन र चित्कार गुञ्जिए । ती हिजोका रक्षक हातहरू आज भक्षक भए । हामी जवान भाइभतिजा र नातिनातिनालाई त पिटे पिटे, आमासरिकी आफ्नी भाउजू अर्थात् मेरी आमालाई पनि छाडेनन् ।
भैरव (not verified) — Thu, 09/17/2020 - 12:25
कारूणिकताले भरिएकाे वास्तविक ...... सार्है मार्मिक ............
रङ्गिन होस रे जीवन
देश दुखेको कविता
झलमल सृष्टि अनि जून तारा